တရုတ် လေ ဆိုင်းငံ့မှု တွန်း F15 37206875177 စက်ရုံ နှင့် ထုတ်လုပ်သူများ - ကွမ်ကျိုး Junshang ကုန်သွယ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက်။
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လေ ဆိုင်းငံ့မှု တွန်း > လေ Suspensin တွန်း ဘို့ ဘီအမ်ဒဗလျူ > လေ ဆိုင်းငံ့မှု တွန်း F15 37206875177
လေ ဆိုင်းငံ့မှု တွန်း F15 37206875177
The အောက်ပါ ဟုတ်တယ် အကြောင်း လေ ဆိုင်းငံ့မှု တွန်း F15 37206875177 ဆက်စပ်, ငါ မျှော်လင့်ပါတယ် ရန် ကူညီပါ မင်း ပိုကောင်း နားလည်သည် လေ ဆိုင်းငံ့မှု တွန်း F15 37206875177
Junshang Air Suspension Compressor F15 37206875177 BMW X5 F15 အတွက် ၂၀၁၃-၂၀၁၈ Air Suspension Pump
Air Suspension Compressor F15 ကို OE compressor 37206875177. အစားထိုးရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ လေကြောင်းလိုင်း၏ compressor သည်လိုအပ်သည့်အတိုင်းလေပေါက်မှုကိုဖောင်းကြွစေခြင်းသို့မဟုတ် deflates ပြုလုပ်သည်။ မော်တော်ယာဉ်စက်ရုံအမြင့်အောက်တွင်ကျသောအခါ compressor သည်လေအိတ်များကိုဖွင့ ်၍ ဖြည့်သည်။ အစိတ်အပိုင်းအားလုံးသည်တင်းကြပ်စွာစစ်ဆေးထားသော၊ ခံနိုင်ရည် ရှိ၍ အပူခံနိုင်ရည်ရှိသည့်အိုလက်စွပ်၊ အရည်အသွေးမြင့်ပစ္စတင်နှင့်မော်တာအသစ်များသည်လေထုကိုဆိုင်းထိန်းစနစ်ဖြင့်အဆက်မပြတ်အရှိန်မြှင့်ပေးသည်။
BMW X5 F15 အတွက်
Junshang Air Suspension Compressor F15 37206875177 BMW X5 F15 အတွက် ၂၀၁၃-၂၀၁၈ Air Suspension Pump Wear- နှင့်အပူဒဏ်ခံ O-ring၊ အရည်အသွေးမြင့်ပစ္စတင်နှင့်မော်တာအသစ်တို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ အသွင်အပြင်နှင့်အတွင်းပိုင်းအညီအမျှအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့များမှာ!
hot Tags:: လေ ဆိုင်းငံ့မှု တွန်း F15 37206875177, တရုတ် စက်ရုံ, ထုတ်လုပ်သူများ ပေးသွင်းသူများ, လုပ်သည် in တရုတ်
လေ ဆိုင်းငံ့မှု တွန်း G12 37206861882
လေ ဆိုင်းငံ့မှု တွန်း E70 37226775479
လေ ဆိုင်းငံ့မှု တွန်း F02 37206789450